Gxila R Heat Pump sika & D Ukukhiqiza
Aquark is a professional inverter pool impompi yokushisa nomkhiqizi e Guangdong, China. It yasungulwa ngu iqembu ezinsimbini iminyaka professional impompi yokushisa isipiliyoni 20.
R Namandla & D
Idizayini yezimboni Amandla
Aquark uneqoqo Abaklami zezimboni abanothando. Bayalihlonipha emakethe & amakhasimende futhi udale amazing uMnu Ukuthula setshe design. Bayoqhubeka ukudala imiklamo athandwayo esengeziwe engcono ikhasimende isipiliyoni.
Amandla core Aquark iyona R & D ethimba, ungumnikazi we okuholela ukulawula inverter ubuchwepheshe uhlelo kanye ukushisa pool uhlelo futha ubuchwepheshe. Njalo unjiniyela ugcwele imibono ukuze ifohle ubuchwepheshe yendabuko pool ukushisa amaphampu, ukunikela brand izixazululo entsha ukuze abalingani bethu bamazwe omhlaba.
I-International Standard Laboratory
Okuqinile Quality Production